Ama-spinners e-India akhipha ama-Proteas babahlule kakhulu
Ama-Standard Bank Proteas ebengenampendulo kumakhono nobukhali bama-Indian wrist spinners njengoba belahlekelwe ama-wicket angu-9 kuma-runs angu-67 nahlulwa ngama-wicket ayisishagalolunye kumdlalo wesibili we-Momentum ODI e-SuperSport Park ngeSonto.
Umdlalo wonke ube ama-overs angu-53 njengoba ama-Proteas akhishwe wonke ngama-runs angu-118 – umphumela wabo omncane kunayo yonke kwi-ODI kulenkundla – futhi i-India yanqoba umdlalo udlule kuma-overs amancane ngale kwesidlo sasemini.
i-Man of the Match u-Yuzvendra Chahal uthathe u-5/22 kuma-overs angu-8.2 futhi usekelwe kahle u-Kuldeep Yadav (3/20 kuma-overs angu-6).
Ama-partnerships akade esile kuma-Proteas aphume ku-Hashim Amla no-Quinton de Kock abahlanganise ama-runs angu-39 nge-wicket yokuqala no-JP Duminy nomdlali omusha u-Khaya Zondo abahlanganise u-48 nge-wicket yesihlanu.
Ngesikhathi kushaya i-India, u-Shikhar Dhawan (51 engaphumanga emabholeni angu-56, 9 fours) no-Virat Kohli (26 engaphumanga emabholeni angu-50, 4 fours, 1 six) bahlanganise i-partnership engaphulwanga yama-runs angu-93 nge-wicket yesibili ukunqobisa iqembu labo.
Umdlalo wesithathu we-ODI uzodlalelwa e-PPC Newlands ngoLwesithathu.
u-Markram ufakwe njengokapteni kuze kuphele i-ODI series uKohli uhole umjaho we-India ngekhulu elihle Ama-Proteas ahlosa ukulinganisa iso elilodwa libheke i-World Cup uDuminy ulindele enye i-ODI Series enomqhudelwano u-De Villiers uphumile kuma-Momentum ODI amathathu ngokulimala umunwe Ubuqhawe buka-Amla kubeka ama-Proteas ngaphambili kancane uNgidi no-Zondo babaliwe kwiqembu lama-Proteas lama-ODI Ama-Proteas akhipha i-India kalula kwi-surface ehlolayo u-Du Plessis udumisa ‘okukhethekile’ kumdlalo wama-Proteas Amabutho abangayo u-Kohli no-De Villiers baphakathi nendawo kwisiteji Kukhona ama-runs angatholwa – u-Markram